On website this, waxaannu samaynaynaa qoraalka dhamaystiran oo Inyar by Inyar: Research Social ee Age Digital la heli karo lacag la'aan. Inta aad akhriska buugga, waxa aan qiyaaso dhaqanka akhristaha in wadar ahaan labada lug. Tusaale ahaan, waxa aan qiyaaso oo qeybaha kala duwan ee buugga aad inta badan ka akhriso. Xogtan waxay naga caawin doontaa hagaajiyo buugga. Waxaan sidoo kale socda tijaabo-caadi ah loo yaqaan A baaritaano / B -in si ay nooga caawiyaan iibiyaan nuqulo dheeraad ah ee buugga. Wax walba oo aan samaynayno waa caadi on websites casriga ah. Waxaan ku sifayn si faahfaahsan hoos, oo waannu muujinaya doonaa waxa aynu samaynay iyo wixii aan ka bartay on our blog .
Waa maxay macluumaadka aan ha ururiyaan?
Waxaan u isticmaali Google Analytics si ay u ururiyaan macluumaad ku saabsan sida aad ula falgalaan website this. Dheeraad ah, sida websites ugu, waxaanu isticmaali cookies si kor loogu qaado khibradaada, soo ururin macluumaad booqdaha guud, iyo socdaan ay booqatay website-kayaga. Fadlan tixraac ah "ayaan u isticmaalnaa cookies?" qaybta hoose wixii macluumaad ah ee ku saabsan cookies iyo sida aan u isticmaali.
Sidee u isticmaali macluumaadkaaga?
Kasta oo macluumaad ah in aan u soo ururin loo isticmaali karaa cilmi-baarista, si loo hagaajiyo buugga, iyo si ay u caawiyaan iibiso buugga.
Waxaan fuliyo noocyo kala duwan oo tallaabooyin ammaan si ay u ilaaliyaan ammaanka macluumaadka aad na siiso.
Inta badan macluumaadka dhirta in aannu waxa lagu kaydiyaa Google Analytics , oo waxaad ka akhrisan kartaa dheeraad ah oo ku saabsan mabaadiida ammaanka iyo asturnaanta .
Qoritaan gaaban in aad ku darto waxaa maamula hypothes.is , oo waxaad ka akhrisan kartaa dheeraad ah oo ku saabsan shuruudaha shaqada .
Our website waxaa marti Github Pages , iyo waxaad ka akhrisan kartaa badan oo ku saabsan Github ee shuruudaha adeega .
Ma waxaan u isticmaali cookies?
Haa. Kukiyada waa files yar in goobta ama wareejinta ay adeeg bixiyaha si drive adag your computer ayaa iyada oo loo marayo browser web (haddii aad u oggolaadaan) oo awood u goobaha ama nidaamka adeeg bixiyayaasha in la aqoonsado aad browser iyo qabashada iyo xusuusan macluumaadka qaarkood.
Si aad u bixiyaan khibrad site wanaagsan, waxaan u isticmaali cookies si ay u fahmaan iyo badbaadin aad rabitaanadayda booqashooyin mustaqbalka iyo inay isku ururiso macluumaadka wadar ahaan labada lug ku saabsan gaadiidka goobta.
Ma in aan u bandhigno macluumaad kasta oo xisbiyada ka baxsan?
Annagu ma iibiso, ganacsiga, ama haddii kale lagu wareejiyo si ay labada dhinac ka baxsan aad macluumaadka shaqsiga lagu garan marka laga reebo sadexaad oo ay aaminsan yaa inaga caawiyo in ka hawlgala our website, cilmi, ama bixinta adeegga aad u, inta dhinacyada kuwa ku heshiiyaan in ay macluumaadkan si qarsoon . Waxa kale oo laga yaabaa in aan sii daayo macluumaadka marka aan rumaysan sii daayo haboon tahay in ay u hoggaansamaan sharciga, dhaqan siyaasado boggayaga, ama ilaalin annagaa leh ama xuquuqda, hanti, ama ammaanka dadka kale.
links Xisbiga Saddexaad
Mararka qaarkood, at our digtoonaan, waxaan ka mid noqon kara xiraya boggag xisbiga saddexaad. Goobahan xisbiga saddexaad waxay leeyihiin siyaasado gaar ah kana madaxbannaan gaarka ah. Waxaan, sidaas darteed, ma laha mas'uuliyadda ama deyn ah ee content iyo hawlaha oo ka mid ah goobaha lala. Si kastaba ha ahaatee, waxaan doonaya in ay ilaaliyaan daacadnimada our site iyo soo dhaweyn wax jawaab-celin ku saabsan goobahan.
By isticmaalaya our site, aad u fasaxdo in siyaasadda asturnaanta.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah, fadlan noogu soo dir email info@bitbybitbook.com .